Isineke sikaMcCarthy siya ngokuncipha | Scrolla Izindaba
Isineke sikaMcCarthy siya ngokuncipha
Umqeqeshi waMazulu uBenni McCarthy uthe uphelelwa yisineke ngabadlali bakhe.
“Sekuyisikhathi sokuthi babhekane nemiphumela emibi yeqembu kwi-DStv Premiership,” uyasho.
Usuthu lubanjwe ngegoli elilodwa kwelilodwa yi-Supersport United ngoLwesithathu ngemuva kokudedela isikhala esincane esiwombeni sokuqala.
“Selokhu ngaba ngumqeqeshi waMaZulu, besiphethe yonke imidlalo kodwa akukho esingakukhombisa ngakholokho. Kuyakhathaza,” kusho lo mdlali oshaye amagoli amaningi kwiBafana Bafana.
Kube wuhambo olunzima kuMcCarthy emidlalweni yakhe eyisithupha ephethe Amazulu – ebhalisa ukunqoba okukodwa, ukuhlulwa kabili nokudlala ngokulingana okuthathu.
“Ngiphelelwa yisineke. Ngibona sengathi abadlali badinga ukulindela okuningi okuphuma kubo. Kulula kakhulu uma ulahla amaphuzu afana nalawa futhi kungekho noyedwa ofuna ukuzibophezela. Umsebenzi wakho uba nzima, ” uyasho.
Ngaphambi kokuqala komkhankaso, Usuthu lumemezele inqwaba yabadlali abasha okubalwa kubona omakadebebona be-Kaizer Chiefs uTsepo Masilela noSiphiwe Tshabalala. Baphinde babophela ngomdlali wangaphambilini we-Orlando Pirates, uLuvuyo Memela nomdlali wasesiswini, uXola Mlambo.
Kepha uMcCarthy ufuna umengameli weqembu nabaphathi bangene ezimakethe zokudlulisa.
“Angifuni ukuthi lokhu kube yiqembu laMazulu elidlala kahle ngendlela eyisimanga, elibusa imidlalo neliphethe ibhola kodwa liphume neqanda. Kusenezicucu zephazili ezilahlekile futhi ngethemba ukuthi singangena emakethe silethe umuntu ozimisele ukuthatha ubuholi beqembu asinqobele imidlalo,” kusho uMcCarthy.
Usuthu lumi endaweni yeshumi ku-log ngamaphuzu ayi-12 emidlalweni eyi-12.
Inselelo elandelayo kaMcCarthy isekuhambeni lapho ezodlala ne-Baroka FC e-Polokwane ngoMgqibelo ntambama enkundleni yezemidlalo i-Peter Mokaba. I-Baroka isendaweni yesishiyagalombili etafuleni ngamaphuzu ayi-15 asuka kwinani elifanayo lemidlalo